घरज्वाई बस्ने केटा खोज्दै ज्योति मगर: कसरी बनाइन् भव्य महल, लग्जरी कार? – Sandesh Press
घरज्वाई बस्ने केटा खोज्दै ज्योति मगर: कसरी बनाइन् भव्य महल, लग्जरी कार?
January 4, 2021 87
काठमाडौं। चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका तथा मोडल ज्योति मगरले काठमाडौंमा भव्य घर बनाएकी छिन्। कलाकारिता बाटै उनले काठमाडौंमा घर बनाएको कुरा पहिले नै बताएकी थिइन्। कोरोना महामारी शुरु भन्दा पहिले नै बनाइसकेको घरमा हाल उनी बस्दै आएकी छिन्। विकट गाउँ रोल्पामा जन्मेर काठमाडौंमा संघर्ष गर्दै आफूले घर बनाएको कुरामा उनी गौरव गर्छिन्।
काठमाडौंको कोटेश्वरमा उनले तीन तलाको भव्य विशाल घर बनाएकी छन्। अविवाहित गायिका मगरले अब बिहे गर्ने इच्छा पनि प्रकट गरेकी छन्। उनले आफुले घरज्वाँई बस्ने दुलाह खोजिरहेको तर मन मिल्ने मान्छे नपाएको पनि उल्लेख गरिन्। रमाइलो गर्दै उनले भनिन्: ‘घर भैसक्यो अब घरजम गर्ने तयारीमा छु।’
ज्योती मगर विशेषगरी उनका गीत र भिडियो अनि समय समयमा दिने बयानका कारण प्रायः चर्चामा रहने गर्छन्। नेपाली समाजले उनका धेरै गीतहरूलाई पाच्य मान्दैन। दशकभन्दा लामो समयदेखि कलाकारीतामा सक्रिय उनले नाम र दाम दुवै कमाएकी छन्।
पछिल्लो समयमा उनले आफ्ना गीतहरुमा केही परिवर्तनहरू देखाउन थालेको देख्न सकिन्छ। शुरुवातमा उत्ताउला र उच्छृंखल हुने गीतहरू अहिले अलिकति सुधार भएको हुन सक्ने धेरैको बुझाई रहेको छ।
उनको घरमा उनका दिदीका छोरा पनि बस्दै आएका छन्। उनीसँग आफ्नै लग्जरी कार पनि छ। उनको शौखिन जीवनशैली निक्कै लोभलाग्दो छ। अरु कालाकारको अवस्था हेर्दा र ज्योतिलाई नियाल्दा उनले आकाश, पाताल हुनेगरी आर्थिक रुपमा सम्पन्नता ल्याएकी छिन्।
Prevगरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन !
Nextअक्षय कुमार आफ्नो छोरीको अनुहार किन लुकाउन चाहन्छन्, खुल्यो यस्तो रहस्य
दाँतमा खिया लाग्ने समस्या छ ? यसरी हटाई दाँतलाई बनाउनुहोस् चम्किलो र सफा
इन्डियन लाहुरे राहुल र स्मिताको प्रेम कथामा बन्यो यस्तो फिल्म , सबैका आखा रसाए….भिडियो हेर्नुस
मेघगर्जन, चट्याङ्ग र हावाहुरीसहित पानी पर्ने सम्भावना
सकियो चिन्ता विश्वभर खुशीयाली, मानवतालाई उपहार हो यो खोप, जसले अब बचाउँछ मानव जगतलाई !
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी हेर्नुहोस (3410)
यहा सम्म आइसकेपछी नपढी तल नसार्नुहोला,नत्र ठुलो पछुतो हुनेछ (3211)
घरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ’णा लाग्छ”! (2024)
अकस्मात सुनको मूल्य मा किन आयो यस्तो परिवर्तन ? (1929)
स्कूल बसवाट खसेर ६ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको घटनास्थलमै मृत्यु (1854)
हार्दिक बधाई !! नेपाली सेनाको पहिलो महिला गुल्मपति ‘मेजर सृष्टी खड्का’ (1444)
प्रहरीको कुकुर गाउँ आउने भएपछि गोठालो गएका दिनेश (1433)
दोस्रो बिहे गर्दा बिरोध गर्नेलाई स्वेताको जवाफ (1307)
मुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा बनाउनुको र’हस्य खुल्यो! चोखो मनले सेयर गर्नुहोस पुण्य मिल्ने छ ! (1052)
झापाको बिर्तामोडकी यी महिला जसले ठगिन् एक करोड ! (1047)
काठमाडौं जादै गरेको बस दु’र्घट’ना, तीनको मृ’त्यु
आलुको एउटा फोटोलाई १२ करोड रुपैयाँ
धनको मामिलामा कुन महिना जन्मेका मानिस कति भाग्यमानी ? हेर्नुहोस् !
विश्वलाई चकित पारे नेपाली युवाले क्रोनाको ओखती बनाएर नेपाल सरकारलाई दिए चुनौती,७ दिनमै क्रोना चट्टै के होलत साच्चिकै!!!
आइतबार मात्रै घर फर्किएका मदनकृष्ण श्रेष्ठ फेरि अस्पताल भर्ना